एउटा एस्तो भिडियो जुन राता रातभाईरल बन्यो , खिच्ने मान्छेलाई पनि लागेन विश्वास , के छ त्यस्तो यो भिडियोमा ? – Sandesh Press
November 7, 2021 533
इजरायलको हैफामा बस्दै आएका पटेल प्रोफेस्नल हवाई फोटोग्राफर हुन् । सामान्यता ड्रोन चलाएर वर्षभरि निजी काम गर्ने पटेललाई अहिले विश्वभरबाट अन्तर्वार्ता र अन्य काम गर्नका लागि इमेल आइरहेको छ । बीबीसीसामाजिक सञ्जालमा कहिले के भाइरल हुन्छ थाहा हुन्न । यस्तै अहिले भेडाहरुको चर्चा छ, जुन भाइरल भै रहेको छ । इजरायलका लिअर पटेलले ड्रोनबाट खिचेको भेडाको बथानको भिडियो भाइरल भएको छ । उक्त टाइम ल्याप्स भिडियोलाई फेसबुकमा लाखौं पटक हेरिएको छ । दक्षिण इजरायलको पिस भ्याली योकनियामको फार्ममा रहेका भेडाको बथानको भिडियो खिचिएको हो ।
Prevगंगा नदीमा तैरिदै आएको काठको बाकसमा फेला परिन् २१ दिनकी बालिका
Nextरुदै रुदै सकियो महान श्रीमान र अनिताको भाईटिका तिहार,दिदिले बुहारीलाई रुदै टीका लगाइदिए (भिडियो हेर्नुस्)
को’रोना संक्रमणबाट एकै घरका बुवा, आमा र छोराको मृ’त्यु !
आफ्नो दुख अरुलाई सुनाउँदैनन् यी राशि हुने व्यक्तिले, जति पीडा भएपनि बस्छन् सहेरै